double shaft moodeel alaabada ugu dambeysa ee soosaarayaasha matoorka labada dhinac
240 volt matoorrada korantada iibka ah
Soo-saare Gawaarida laba jibaaran ee warshadaha, Mashiinka Mashiinka Crane, Mashiinnada matoorrada leh, Mobilada Shaftoo Laba Jibaaran iyo matoor Wejiyada Korontada Kaliya ee ay bixiso Sogears.
Soosaaraha Shiinaha ee loo yaqaan 'Double Shaft Motor'
Diyaar ma u tahay inaad iibsato mooto laba gees ah? Noocyo fara badan oo kala jaad jaad ah ayaa loo heli karaa
Waa kuwan sawirro tixraac ah.
Double usheeda dhexe Motor AC Electric
Laba guntin AC matoor oo leh sanduuq qalabka lagu bixiyo oo siiya torque fiican iyo rpm at voltages hoose. labajibbaarana xadhig koranto 380V torque 100kg dc motor dc square gear motor.
Laba jibaar Shaft / Jaale Gaari
Gawaarida DC oo ay ku jiraan sanduuqa qalabka lagu xiro, oo si farsamo ahaan ay korantada mowjad korantada uga shaqeysa toos uga socota hadda (DC) .Motor leh 150 RPM caag ah Geised. AC laba duul oo koronto ah oo loogu talagalay badda, baabuurta, qalabka taageerada dhulka, macdanta.
MADAXA SHAQAALAHA GUUD
Noocaani wuxuu leeyahay 12V burush DC ah oo leh burush cimri dherer leh oo lagu daray 31.25: 1 bir ah. Waxaan kaydinaa oo aan marin u helnaa dhammaan Moodhadhka Shabaqa leh ee Labada Dhinac ee Bard, Marvair iyo noocyada kale.
Halkan waxaa ah Kuwa badan oo SHAQAALO SHAQAALO KHATAR AH OO Waxaad Raadineysaa
Halkan waxaa ku yaal qiimeyaal badan oo qiimo hooseeya, matoorrada dc matoor tayo sare leh oo leh adduunka oo dhan. Haddaad rabto inaad iibsato mooto rakhiis ah 150 rpm laba dhinac ah, halkan ka dooro 150 rpm laba guluub mobilada. “Moodada laba-gees” waxay leedahay “laba shaambadood” oo ka baxa kiiska gawaarida. Gawaarida Hollow-shaft 1 PM6/1PM4 - Taageerada Warshadaha.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid waad nala soo xiriiri kartaa, waan ku faraxsanahay inaan ku caawino! Adeegga macaamiishayadu wuxuu khadka tooska ugu jiraa onlayn maalinta oo dhan. Sannado badan oo waayo-aragnimo ah oo soo saarista gawaarida ah ayaa ah inay ku siinayaan mooto tayo sare leh oo waara. Halkan ka hel Double Moft Shaft, Dual Shaft Motors.
Raadi oo isbarbar dhig dhammaan matoorrada Siemens oo leh faahfaahin farsamo oo buuxa oo keliya matrix warshadeed. Waxaan haynaa dhammaan buugga diiwaangelinta matoorrada korantada ee Siemens, Tafaasiisha guud ee Awooda: 20 hp Voltter: 410 volts Wajiga: 3 RPM: 1755 rpm Frame: 215TZ.
Aynu Wada Hadalno!